onlineakhabar.com: 'बालिका वधू' की अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जीको मृत्यु रहस्यमय (भिडियो)
India News, International, Pratyusha Banerjee, Suicide Case, Video » 'बालिका वधू' की अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जीको मृत्यु रहस्यमय (भिडियो)
'बालिका वधू' की अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जीको मृत्यु रहस्यमय (भिडियो)
हिजो शुक्रबार भारतिय चर्चीत टेलिसिरियल 'बालिका वधू' कि अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जीले पासो लगाएर आत्महत्या गरेकी छन् । उनको मृत्युले बिभिन्न कलाकारहरु बिभिन्न टिप्पणी गर्न थालेका छन् । मृत्युलाई प्राय कलाकारले आत्महत्या नभइ प्लान सहितको हत्या भएको बताएका छन् । प्रत्युषाको नजिकका आफन्त तथा साथीहरुले ब्वायफ्रेण्ड माथी शंका गरेका छन् भने उनी पछिल्लो समय घरमा ह्याङ भएर आएकी र त्यसपछि आत्महत्या गरेको भन्ने पनि बाहिर आइरहेको छ । मृत्युबारे सामाजिक संजालमा प्रत्युषाको स्टाटसका कारण घटनाले एउटा नयाँ मोड लिएको थियो भने फेरी प्रत्युषाको मोबाइल गायब हुनुले पनि उनको मृत्यु थप रहस्यमय बनेको छ ।
प्रत्यूषा मृत्युको खबरले भारतका सबै कलाकारहरु सतब्ध बनेका छन् । भारतिय संचार माध्यमहरुमा देखाइए अनुसार हरेक कलाकारको मुखबाट एउटै कुरा सुन्न सकिन्छ कि उनको मृत्यु आत्महत्या नभइ हत्या भएको शंका व्यक्त गरेका छन् । यहाँ प्रत्युषाको नजिक रहेकी रतन राजपुतले पनि यहि बताएकी छन् कि उनि ह्याङ भएर घर आएको भए उनको ब्वाईफ्रेण्ड राहुल कहाँ छन्? प्रत्युषाको मोबाइल कहाँ छ? जस्ता रहस्यमय प्रश्नहरु मिडिया माथी नै गरेकी छन् । हेर्नुहोस् भिडियो
Tags : India News International Pratyusha Banerjee Suicide Case Video